Lupine. Akateedzana uye mabhuku nezveakakurumbira mbavha naMaurice Leblanc | Zvazvino Zvinyorwa
Lupine. Akateedzana uye mabhuku nezveakakurumbira mbavha naMaurice Leblanc
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Noticias, Novela, Nhema nhema, dzakawanda
Arsène Lupine, inozivikanwa uye inoyevedza mbavha jira jena rakagadzirwa nemunyori wechiFrench Maurice LeBlanc, yakaiswa kumashure fashoni. Kana kuti zvimwe zvagara zvakadaro, kunyanya munyika yeGallic, uko ari mumwe wevanyori vayo vanozivikanwa kwazvo. Yaiva yekutenda ku Lupine, mumumvuri weAcesène, iyo inoverengwa semusoro wenyaya wakabudirira TV dzino ichangoburitswa. Achitaura nemukurumbira mutambi weFrance Omar Sy, uye nemufananidzo wake nemabhuku kumashure, iri pembedzo yekuita kudzokorora.
2 Arsène Lupine, knight uye mbavha
3 Iyo Countess yeCagliostro uye Iyo Hollow Tsono
4 Lupine - Iwo akateedzana
5 Mamwe mazita ane Lupine
5.2 Mhosva dzeFrance: anthology
5.3 Sherlock, Lupine, uye Me: The Black Lady Makumi matatu
Leblanc akaberekerwa mu Rouen en 1864 uye akatanga basa rake rekunyora muParis. Vhura 1905 akagadzira Arsène Lupine, hunhu uyo ​​akazopedzisira ave mumwe wevakakurumbira mumabhuku eutikitivha.
Lupine imba yakatsiga, yakashongedzwa uye inokwezva chena-kora mbavha inoba kubva kuvanhu vakaipisisa kupfuura iye. Nyeredzi mune mamwe enganonyorwa makumi maviri nenyaya. Lupine uye nyaya dzake dzinoonekwa nevakawanda seiyo ChiFrench chinyorwa che Sherlock Holmes. Muchokwadi, gore rimwe chete mushure mekugadzirwa kweLupine, Leblanc akanyora akateedzana e nhoroondo mairi yakabatanidza mavara maviri, kunyangwe Holmes aive Herlock Sholmes.
Arsène Lupine, knight uye mbavha
La primera Nyaya yaLupin inoonekwa sechimedu chechikamu che pulp mabhuku. Yake yekutanga yaive nhevedzano ye nyaya dzakaburitswa mumagazini Je Sais Tout, iyo yaizogadziriswa pamwe chete nemusoro uyu. Ndiro bhuku rekutanga iro anotambidza baba vake protagonist yeakateedzana yeTV. Iyo zvakare ine nyaya Mambokadzi Mhete, inova chikamu chechikamu chechitsauko chekutanga chezviteedzana.
Iyo Countess yeCagliostro uye Iyo Hollow Tsono
Aya mazita anotaurwawo mune akateedzana. Yokutanga rine yakanakisa element uye zvemashura izvo Leblanc akaisa munyaya dzeLupine. Pano, semuenzaniso, mbavha inosangana nemugari wenhaka weDuke weCagliostro, chakaipa chisingafi uye chinyorwa cheHolmesian Professor Moriarty.
Lupine - Iyo Serie
Mune akateedzana ayo anogadzira Netflix chimiro chaLupine uye iwo mabhuku ndeaya kumashure uye ndivo Kufuridzirwa yemutambi mukuru, Assane diop (Omar Sy). Diop murume anoda kuzviita kujekesa zita rababa vake, uyo akazviuraya mutirongo, achipomerwa zvembavha zvaasina kupara nenjodzi iyo yaaishandira achityaira.
Hupenyu hwakaomesesa hwaDiop hwamuita mbavha yakangwara, iyo, inotsigirwa ne XNUMXst century technology, kutambisa huchenjeri mumapfekero avo uye modus operandi kuita izvozvo kutsiva kurwisa murume akanyudza baba vake. Izvi zvakamupa muhucheche hwake bhuku rekutanga reLupine uye mudiki Diop akazvitora sereferenzi.
Inonakidza kwazvo, inongova ne 5 zvitsauko izvo zvinoonekwa ipapo. Uye zvese zviri zviviri charisma yaOmar Sy kufanana nedanho mu Paris izvozvi uye marongero emanovel aLupin akakosha kuti aone seyakanaka mutero al hunhu hwekunyora.
Mamwe mazita ane Lupine
Iko kufungidzira Muzukuru waLupin uye chikwata chake chembavha ndivo protagonists ve Manga , que Tsoko Punch, zita rechikuva Kazuhiko Kato, Ndinotenda 1967 uye kuti yatove icon mune yechiJapan tsika nekuda kwekuda kukuru kwehunhu huripo mu Japan. Ikoko yakagadziridzwa kune akasiyana akateedzana, mitambo yemavhidhiyo uye mabhaisikopo e Anime.
Zvakananga nhasi anovhura pahwindo guru Lupine III: Yekutanga, nyowani nyowani yehupenyu ye3D inotungamirwa na Takashi yamazaki.
Mhosva dzeFrance: anthology
Uyu nyaya yekuunganidza, nevanyori kubva muzana ramakore rechiXNUMX rinosvika kumagumo kwemaXNUMX, inosanganisira Leblanc pamwe naMérimée, Balzac, Dumas, Maupassant, Apollinaire kana Gaston Leroux, musiki we Phantom yeiyo opera.
Sherlock, Lupine, uye Me: The Black Lady Makumi matatu
Lupine inowanikwawo mune ino muunganidzwa we nyaya dzevechidiki, naPierdomenico Baccalario naAlessandro Gatti, inonzi yakanyorwa na Irene adler. Mune izvi, munyori anoyeuka zviitiko zvehudiki zvekuti aigara nemutikitivha uye nemukomana wechiFrench anofarira kukamura izvo zviri zvekune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Lupine. Akateedzana uye mabhuku nezveakakurumbira mbavha naMaurice Leblanc
Iyo inoshamisa inoverengeka uye akateedzana ibasa rinoshamisa.
Akanakisa Nhoroondo yeNoveli Mabhuku
Mabhuku anotengesa zvakanyanya